Miasa am-paharetana - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2017-04 mpandimby ny Magazine > Miasa amim-paharetana
Fantatsika rehetra ilay fitenenana hoe: “Ny faharetana dia hatsaran-toetra”. Na dia tsy ao amin’ny Baiboly aza izy io, dia betsaka ny zavatra resahin’ny Baiboly momba ny faharetana. Antsoin’i Paoly hoe vokatry ny Fanahy Masina izany (Gal 5,22). Mampirisika antsika koa izy mba hanam-paharetana amin’ny fahoriana2,12) mba hiandry amim-paharetana izay tsy mbola ananantsika (Romana 8,25) mba hifandefera amin’ny fitiavana (Efes 4,2ary aza ketraka amin’ny fanaovan-tsoa, ​​fa raha manam-paharetana isika, dia hijinja koa (Galatiana 6,9). Mampirisika antsika “hiandry an’i Jehovah” koa ny Baiboly ( Salamo 27,14), saingy indrisy fa io fiandrasana marary io dia diso fandraisan'ny sasany ho fiandrasana mandalo.
Ny iray tamin'ireo pasitera isam-paritra dia nanatrika ny fihaonambe izay namalian'ny mpitondra fiangonana ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanavaozana na iraka toy izao manaraka izao: "Fantatsika fa mila manao izany amin'ny ho avy isika, fa ankehitriny dia miandry ny Tompo." Azoko antoka fa nino ireo mpitarika ireo fa manam-paharetana izy ireo amin'ny fiandrasan'Andriamanitra ny hanoro azy ireo ny fomba hanatonany olon-tsy fantatra. Misy fiangonana hafa miandry fambara avy amin'ny Tompo hanova ny andro na ny fotoam-pivavahana mba hanamora kokoa ny mpino vaovao. Ny pasitera isam-paritra dia nilaza tamiko fa ny zavatra farany nanontaniany ilay tohatra dia: "Inona no miandry ny hataon'ny Tompo?" Avy eo dia nohazavainy azy ireo fa Andriamanitra dia mety miandry azy handray anjara amin'ny asany efa miasa sahady. Rehefa nifarana izy dia azo henoina avy amin'ny lafiny maro ny "amena".
Raha manana safidy sarotra azo atao isika, dia te handray famantarana avy amin'Andriamanitra fa afaka maneho ny hafa isika - iray izay milaza amintsika hoe aiza no alehantsika, ahoana ary oviana manomboka. Tsy toy izao ny fomba iasan'ny Andriamanitra amintsika. Fa fotsiny kosa izy nilaza hoe "araho aho" ary mandrisika antsika handroso tsy hahalala ny antsipiriany. Tokony ho tsaroantsika fa ny mpianatr'i Jesosy indraindray dia sarotra tamin'ny fahatakarana ny toerana nitondran'ny Mesia azy ireo talohan'ny Pentekosta. Na dia mpampianatra sy mpitarika lavorary aza i Jesosy dia tsy mpianatra tonga mpianatra sy lavorary izy ireo. Matetika koa isika dia sahirana amin'ny fahazoana izay lazain'i Jesosy sy ny toerana itondrany antsika - indraindray matahotra ny handrosoana isika satria matahotra sao tsy hahomby. Io fahatahorana io matetika no manosika antsika ho amin'ny tsy fahatomombanana, izay hampitoviana antsika amin'ny fomba feno amin'ny faharetana - miaraka amin'ny "miandry ny Tompo".
Tsy tokony hatahotra ny hadisoanay isika na ny tsy fananantsika mazava momba ilay lalana ho avy. Na dia nanao fahadisoana marobe aza ireo mpianatr'i Jesosy voalohany, dia nomen'ny Tompo azy ireo foana ny fandraisany anjara amin'ny asany - ny hanaraka azy na aiza na aiza no nitarihany azy, na dia izany aza no nataony fanitsiana teny an-dalana. Jesosy dia miasa toy izany koa ankehitriny ary mampahatsiahy antsika fa ny "fahombiazana" rehetra iainantsika dia vokatry ny asany fa tsy antsika.
Tsy tokony ho taitra isika raha tsy mahatakatra tsara ny fikasan'Andriamanitra. Amin'ny fotoanan'ny fisalasalana dia angatahina isika mba hanam-paharetana, ary amin'ny tranga sasany dia midika izany ny fiandrasana ny fidiran'Andriamanitra alohan'ny ahafahantsika mandray ny dingana manaraka. Na inona na inona toe-javatra misy dia mpianatr'i Jesosy foana isika izay nantsoina hihaino sy hanaraka azy. Rehefa manao io dia io isika dia tadidio fa ny fampiofanana ataontsika dia tsy momba ny vavaka sy ny famakiana Baiboly fotsiny. Ny fampiharana azo ampiharina dia mitaky ampahany betsaka - mandroso amin'ny fanantenana sy ny finoana isika (miaraka am-bavaka sy ny Teny), na dia tsy mazava loatra aza ny lalana hitondran'ny Tompo.
Ny tena "fahombiazana" amin'ny asa fitoriana sy ny serivisy dia avy amin'ny fomba iray ihany: amin'ny alàlan'ny fahatokiana an'i Jesosy, ampiarahina amin'ny vavaka sy ny teny ara-Baiboly, izay itarihan'ny Fanahy Masina antsika ny fahamarinana. Aoka hotadidintsika fa tsy hianatra izany fahamarinana izany avy hatrany isika ary ny fahatongavan-tsika dia mampiadana antsika. Manontany tena aho raha sanatria noho ny tahotra ny marina ny tsy fidiny. Jesosy dia nanambara imbetsaka ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny mpianany, ary indraindray ny fahatahorana an'io fahamarinana io dia nanakivy ny fahafahan'izy ireo mihetsika. Efa matetika izany no mitranga amin'izao fotoana izao.
Rehefa miresaka momba ny fandraisantsika anjara amin’ny fanatonan’i Jesosy ny olona tsy fantatra ao am-piangonana isika, dia tojo tahotra haingana. Tsy tokony hatahotra anefa isika, satria “izay ao anatinareo dia lehibe noho izay ao amin’izao tontolo izao” (1. Johannes 4,4). Manjavona ny tahotsika noho ny fahatokiantsika an’i Jesosy sy ny teniny. Ny finoana no tena fahavalon’ny tahotra. Izany no nahatonga an’i Jesosy nilaza hoe: “Aza matahotra, minoa fotsiny ihany!” (Markus 5,36).
Rehefa mandray anjara mavitrika amin’ny asa nanirahana an’i Jesosy sy ny fanompoana amim-pinoana isika dia tsy irery. Mijoro eo anilantsika ny Tompon’izao zavatra ary rehetra izao, tahaka ny nataon’i Jesosy fahiny tany an-tendrombohitra any Galilia (Matio 2.8,16) dia nampanantena ny mpianany. Fotoana fohy talohan’ny niakarany tany an-danitra, dia nanome azy ireo toromarika izay antsoina matetika hoe didy misionera Izy: “Ary nanatona Jesosy ka nanao taminy hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ary ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao » (Matio 28,18- iray).
Andao hodinihintsika eto ny andininy farany. Nanomboka tamin'ny filazany i Jesosy fa manana ny "fahefana rehetra any an-danitra sy et earth an-tany", avy eo dia faranany amin'ireto teny saro-pantarina manaraka ireto: "Miaraka aminao isan'andro aho". Ireo fanambarana ireo dia tokony ho loharanom-piononana sy fahatokisana lehibe ary fahalalahana lehibe amin'ny zavatra nasain'i Jesosy hataontsika: ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izahay dia manao izany amin'ny fahatsapan-tena - mahalala fa mandray anjara amin'ny asan'ilay manana ny fahefana sy ny fahefana rehetra isika. Ary ataontsika amim-pahatokisana izany satria fantatsika fa miaraka amintsika foana izy. Eo an-tsaina ireo eritreritra ireo - fa tsy ireo izay mahita faharetana ho fiandrasana tsy maharitra - miandry amim-paharetana ny Tompo isika amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny asany, izany hoe hahatonga ny olona ho mpianatra ao an-tokantranontsika. Amin'izany fomba izany no handraisantsika anjara amin'ny zavatra azontsika soritana amin'ny faharetana. Nandidy antsika i Jesosy hanao izany satria io no lalanany - ny lalan'ny fahatokiana izay mitondra ny vokatry ny fanjakany mihoa-pampana. Andao isika hiasa amin'ny faharetana.